Mofon’aina – ALATSINAINY 22 MAY 2017 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – ALATSINAINY 22 MAY 2017
17 Ary ireo zatovo efa-dahy ireo dia nomen’ Andriamanitra fahalalana sy saina ny amin’ ny taratasy sy ny fahendrena rehetra; ary Daniela nahafantatra ny amin’ ny fahitana sy ny nofy rehetra.18 Ary nony tonga ny andro nasain’ ny mpanjaka hampidirana azy, dia nentin’ ilay lehiben’ ny tandapa niditra teo anatrehan’ i Nebokadnezara izy.19 Ary ny mpanjaka niresaka taminy, ka tsy nisy hita izay tahaka an’ i Daniela sy Hanania sy Misaela ary Azaria tamin’ izy rehetra, ka dia nitoetra teo anatrehan’ ny mpanjaka izy ireo.20 Ary ny amin’ ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra izay nanontanian’ ny mpanjaka azy, dia hitany fa nanan-tombo im-polo heny noho ny ombiasy rehetra sy ny mpisikidy izay teo amin’ ny fanjakany rehetra aza izy.21 Ary Daniela nahatratra ny taona voalohany nanjakan’ i Kyrosy mpanjaka.
DANIELA 1 :17-21
NY FAHENDRENA NOMEN’ ANDRIAMANITRA
Efa nambaran’ny Soratra Masina fa fanomezana avy amin’ Andriamanitra ny fahendrena ary nampalaza an’i Daniela sy ireo namany telo lahy izany.
1-Hahazoana toerana akaikin’ny mpanjaka
« tsy nisy hita izay tahaka an’i Daniela sy Hanania sy Misaela ary Azaria tamin’izy rehetra , ka dia nitoetra teo anatrehan’ny mpanjaka izy ireo »(and 19). Maneho izany fa rehefa miara-mandeha amin’ Andriamanitra ka mahazo tombom-pahasoavana tokoa ary miavaka amin’izay atao. Ny fiainam-bavaka nananan’i Daniela sy ny namany no mendrika halain-tahaka rehefa mamaky ny Boky Daniela isika. Hampanakaiky antsika amin’ Andriamanitra mpanjaka, dia i Jesoa Kristy ny fivavahantsika Aminy.
2-Hampiavaka eo anivon’izao tontolo izao
« ary ny amin’ny fahendrena … dia hitany fa nanatombo impolo heny noho ny ombiasy rehetra aza izy » (and 20). Mbola maro ankehitriny ny matoky ireo voalaza farany ireo izay tarihin’izao teny izao mba hahalala fa ny olona nomen’ Andriamanitra fahendrena dia manan-javatra mihoatra noho ireny. Aoka hialantsika ny matoky olona fa fahatokiana an’ Andriamanitra no hizorantsika.
Mofon'aina - TALATA 23…